Ch 25 मत्ती – 2माछा
घर / बाइबल / मत्ती को सुसमाचार / Ch 25 मत्ती
25:1 "त्यसपछि स्वर्गबाट ​​राज्यको दस कन्याहरूले जस्तै हुनेछ, जो, आफ्नो दीपक लिएर, दूल्हा र दुलही भेट्न बाहिर गए.
25:2 तर तिनीहरूलाई पाँच मूर्ख थिए, पाँच चतुर थिए.
25:3 पाँच मूर्ख लागि, आफ्नो दीपक ल्याए भएको, तिनीहरूलाई तेल लिएनन्.
25:4 यद्यपि साँच्चै, को चतुर व्यक्तिहरूले तेल ल्याए, आफ्नो कन्टेनर मा, यस दीपक संग.
25:5 पछि दुलहालाई ढिलाइ भएको थियो, तिनीहरू सबै निदाउनु, र तिनीहरूले सुतिरहेको.
25:6 तर रात को बीचमा, एक कराउँदै बाहिर गए: 'हेर, दूल्हा पुगेपछि छ. उहाँलाई भेट्न बाहिर जानुहोस्। '
25:7 तब ती सबै कन्याहरूले उठेर छोट्याउन आफ्नो दीपक.
25:8 तर मूर्ख व्यक्तिहरूले बुद्धिमानी भन्नुभयो, 'आफ्नो तेल हामीलाई गर्न दिनुहोस्, हाम्रो दीपक निभाउँछ भइरहेका छन् लागि। '
25:9 यो चतुर भन्दै द्वारा प्रतिक्रिया, 'त्यहाँ सायद नत्र हाम्रो लागि र तपाईंलाई पर्याप्त नहुन सक्छ, तपाईं विक्रेताहरु जाने र आफूलाई लागि केही किन्न लागि यो राम्रो हुनेछ। '
25:10 तर यो किन्न तिनीहरूले जाँदै थिए गर्दा, दूल्हा आइपुगे. र विवाह गर्न उसलाई प्रविष्ट तयार थिए ती, र ढोका बन्द भएको थियो.
25:11 यद्यपि साँच्चै, धेरै अन्त मा, बाँकी कन्याहरूले पनि आइपुगे, यसो, 'प्रभु, प्रभु, हामीलाई खोल्न। '
25:12 तर उहाँले यसो भन्दै द्वारा प्रतिक्रिया, 'आमिन तपाईं म भन्न, म तपाईँलाई चिन्दिन।'
25:13 र त तपाईं सचेत हुनुपर्छ, तपाईँले दिन वा घडी थाहा छैन.
25:14 जस्तै मानिसको लामो यात्रा मा बाहिर सेट छ लागि, जसले आफ्ना सेवकहरूलाई बोलाएर आफ्नो सामान वितरित.
25:15 र एक उहाँले पाँच प्रतिभा दिनुभयो, र अर्को दुई गर्न, अर्को उहाँले एक दिनुभयो, प्रत्येक आफ्नै क्षमता अनुसार. र द्रुत, उहाँले बाहिर सेट.
25:16 त्यसपछि उहाँले जो पाँच प्रतिभा बाहिर गए पाएका थिए, र उहाँले यी को प्रयोग गरे, र उहाँले अर्को पाँच प्राप्त.
25:17 अनि यस्तै, दुई पाएका थिए जसले अर्को दुई प्राप्त.
25:18 तर उहाँले जो एक पाएका थिए, बाहिर जा, पृथ्वी मा खने, र उहाँले आफ्नो प्रभुको पैसा लुकेको.
25:19 यद्यपि साँच्चै, लामो समय पछि, ती सेवकहरूको प्रभु फर्के र उहाँले तिनीहरूलाई खाता बसे.
25:20 अनि उहाँले पाँच प्रतिभा प्राप्त गरेकी जब नजिक, उहाँले अर्को पाँच प्रतिभा ल्याए, यसो: 'प्रभु, तपाईं मलाई पाँच प्रतिभा वितरण. हेर, म अर्को पाँच गरेर बढेको छ। '
25:21 आफ्नो प्रभु उहाँलाई भने: 'राम्रो काम, राम्रो र विश्वासी दास. तपाईंले केही कुराहरू भन्दा विश्वासी भएको हुनाले, म धेरै कुरामाथि नियुक्त गर्नेछ. आफ्नो प्रभु को gladness प्रवेश। '
25:22 त्यसपछि उहाँले दुई प्रतिभा प्राप्त गरेकी पनि नजिक, र, उहाँले भन्नुभयो: 'प्रभु, तपाईं मलाई दुई प्रतिभा वितरण. हेर, म अर्को दुई प्राप्त गरेका छन्। '
25:23 आफ्नो प्रभु उहाँलाई भने: 'राम्रो काम, राम्रो र विश्वासी दास. तपाईंले केही कुराहरू भन्दा विश्वासी भएको हुनाले, म धेरै कुरामाथि नियुक्त गर्नेछ. आफ्नो प्रभु को gladness प्रवेश। '
25:24 त्यसपछि उहाँले जो एक प्रतिभा पाएका थिए, आउँदै, भने: 'प्रभु, म एक हार्ड मानिस छन् भनेर थाह. के तपाईं जहाँ छरिएको छैन कटनी, र भेला जहाँ तपाईं छरिएका छैन.
25:25 अनि त, डराउन, म बाहिर गए र पृथ्वीमा आफ्नो प्रतिभा लुकेको. हेर, तपाइँको के हो तपाईं। '
25:26 तर आफ्नो प्रभु प्रतिक्रिया भन्नुभयो: 'तपाईं दुष्ट र अल्छी सेवक! तपाईं म कहाँ छरिएको छैन म कटनी थाह, र भेला जहाँ म छरिएका छैन.
25:27 त्यसैले, तपाईं बैंकरहरुलाई मेरो पैसा सञ्चय छन् गर्नुपर्छ, अनि तेस्पछि, मेरो आगमन मा, कम से कम म ब्याज संग मेरो के हो प्राप्त हुनेछ.
25:28 अनि त, उहाँबाट टाढा प्रतिभा लिन र यसलाई दस प्रतिभा छ जो एक दिन.
25:29 सबैलाई लागि जो, थप दिइएको गरिनेछ, र उहाँले प्रशस्त मात्रामा हुनेछ. तर उहाँबाट नगर्ने छ, पनि के उहाँले छन् देखिन्छ, लगिएको गरिनेछ.
25:30 र बाहिरी अन्धकारमा मा कि बेकारी सेवक डाली, जहाँ त्यहाँ रोइरहेका गरिनेछ र दाँत को gnashing। '
25:31 तर मानिसको छोराको बडाई आइपुगे हुनेछ जब, र सबै उसलाई स्वर्गदूतहरू, त्यसपछि उहाँले आफ्नो बडाई को सीट मा बस्नेछ.
25:32 र सबै जातिका उहाँलाई अघि भेला गरिनेछ. र उहाँले एक अर्को तिनीहरूलाई अलग पर्छ, गोठालो बाख्राको देखि भेडा अलग बस रूपमा.
25:33 र त्यो भेडा स्टेशन हुनेछ, साँच्चै, आफ्नो सही मा, तर आफ्नो मा बाख्राको बाँकी.
25:34 त्यसपछि राजा जो आफ्नो दाहिने हुनेछ ती भनौं: 'आऊ, तपाईं मेरो बुबाको आशिष्. संसारको जग देखि तपाईं को लागि तयार राज्यको अधिकार.
25:35 म भोक थियो, र तिमी मलाई खान दिए; म तिर्खाएको थियो, र तपाईंले मलाई पिउन दिनुभयो; म पराई थियो, र तपाईंले मलाई लाग्यो;
25:36 नाङ्गो, र तपाईंले मलाई ढाकिएको; बिरामी, र तपाईंले मलाई भ्रमण; म झ्यालखानामा, र तपाईंले मलाई आए। '
25:37 त्यसपछि उहाँलाई बस जवाफ हुनेछ, यसो: 'प्रभु, हामी तपाईंलाई भोक हेर्न हुँदा, र तपाईं खुवाउनुभयो; तिर्खाएको, र तपाईं पिउन दिइएको?
25:38 र जब हामी तपाईंलाई एउटा नौलो देखेको छु, र तपाईं लिएको? वा नाङ्गो, र तपाईं ढाकिएको?
25:39 वा हामी तपाईंलाई बिरामी हेर्न गरे जब, वा जेलमा, र तपाईं जानुहोस्?'
25:40 र प्रतिक्रिया, राजा तिनीहरूलाई भनौं, 'आमिन तपाईं म भन्न, जब तपाईं यी मध्ये एक लागि यो गरे, मेरा भाइहरू को कम से कम, तपाईं मेरो लागि यो गरे। '
25:41 त्यसपछि उहाँले पनि भनौं, ती जो आफ्नो बाँया मा हुनेछ: 'मलाई देखि आउट, तपाईं श्रापित व्यक्तिहरूलाई, अनन्त आगोमा, जो शैतानको र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको थियो.
25:42 म भोक थियो, र तिमी मलाई खान दिनुभएन; म तिर्खाएको थियो, र तपाईंले मलाई पिउन दिनुभएन;
25:43 म पराई थियो र तपाईंले मलाई लिएनन्; नाङ्गो, र तपाईंले मलाई कवर छैन; बिरामी र जेलमा, र तपाईं मलाई भ्रमण गर्नुभयो। '
25:44 त्यसपछि तिनीहरूले पनि उहाँलाई जवाफ हुनेछ, यसो: 'प्रभु, गरे जब हामी तपाईंलाई भोक हेर्न, वा तिर्खाएको, वा पराई, वा नाङ्गो, वा बिरामी, वा जेलमा, र तपाईं छैन सेवक गरे?'
25:45 त्यसपछि उहाँले यसो भन्दै तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया पर्छ: 'आमिन तपाईं म भन्न, जब तपाईं यी कम्तिमा एक यो गरेन, न तिमी मलाई यो के गर्नुभयो। '
25:46 र यी अनन्त दण्ड जान पर्छ, तर बस अनन्त जीवन मा जानेछौ। "